देउवाले मिलाए वरियता, यस्तो छ केन्द्रीय सदस्यको वरियता (नामावलीसहित) - केन्द्र खबर
देउवाले मिलाए वरियता, यस्तो छ केन्द्रीय सदस्यको वरियता (नामावलीसहित)
२०७८ पुस १६ १०:४१
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १३५ केन्द्रीय सदस्यको वरियता मिलाउँदा विगतको पद र पार्टी राजनीतिमा लगाएको समयलाई आधार बनाएको देखिन्छ । उनले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित पूर्व पदाधिकारीलाई माथिल्लो स्थानमा राखेका छन् ।
देउवाले सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको वरियता मिलाउँदा वरिष्ठता र विगतको पदलाई पनि आधार बनाएको देखिन्छ ।
उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का धनराज गुरुङभन्दा माथिल्लो वरियतामा छन् । खड्का यसअघि महामन्त्री भइसकेका छन् । गुरुङ पहिलोपटक पदाधिकारी बनेका हुन् । विजयकुमार गच्छेदार चुनाव जितेको भए गच्छेदार खड्का भन्दा माथि हुने अहिलेको वरियताको मापदण्डबाट बुझ्न सकिन्छ ।
गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा भन्दा माथि राखिएका छन् । थापा शर्माभन्दा पहिल्यै केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् । थापा १३औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए । नेविसंघमा भने शर्मा अध्यक्ष भएपछि मात्र थापा महामन्त्री थिए ।
सहमहामन्त्रीमा फरमुलाह मंसुर माथिल्लो वरियतामा छन् । उनी उमेर र अनुभवका आधारमा अन्य महामन्त्री भन्दा पाका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्यमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा गोपालमान श्रेष्ठ छन् । उनी पूर्व उपसभापति हुन् । पूर्वमहामन्त्री सशांक कोइराला श्रेष्ठ पछि छन् । पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादव डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीभन्दा माथि छन् । महत पूर्व सहमहामन्त्री हुन् भने केसी पूर्व प्रवक्ता । पूर्व सहमहामन्त्री सुनिलबहादुर थापा १९औं वरियतामा छन् । वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी पछि मात्र डा. शेखर कोइरालाको वरियता छ । उनी सभापतिमा देउवासँग पराजित भएका थिए ।
बलबहादुर केसीपछि बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको वरियता छ । देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवाको वरियता ८०औं छ । उनी पछि अब्दुल सतार, उदय शमशेर राणा, जीतजंग बस्नेत, नैनसिंह महर र राजीव ढुङ्गाना छन् । अर्बपति विनोदकुमार चौधरीको वरियता ९६औं छ । त्यसपछि पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव छन् । सबैभन्दा पुछारमा १३५औं वरियताका जीवन राना छन् । गणेश लामालाई १३१औं वरियतामा राखिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यको वरियता
९०) सदस्य अजुर्न जंगबहादुर सिंह
कोरोना संक्रमण भएका एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?